Hargeysa: Muran ka taagan Dhisme laga bineeyay Garoon-Kubadeed oo Wasiirka Ciyaaruhu is-hortaagay | Somaliland.Org
Hargeysa: Muran ka taagan Dhisme laga bineeyay Garoon-Kubadeed oo Wasiirka Ciyaaruhu is-hortaagay
June 25, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Wasaaradaha Waxbarashada iyo Ciyaaraha ee Somaliland, ayaa la sheegay inay isku khilaafeen dhismaha mid ka mid ah Garoonada Kubadda Cagta ee Xaafadda 26 June ee Magaalada Hargeysa, kaas oo la sheegay in Wasaaradda Waxbarashadu isku dayday inay ka hirgeliso dhisme, hase ahaatee, ay Wasaaradda Ciyaaraha iyo dhalinyarada Xaafaddaasi ku gacan-saydheen.
Siday Wararku sheegayaan Wasaaradda Waxbarashada ayaa isku dayday inay dhisme ka bilowdo Garoonka Kubadda Cagta ee Dugsiga Sheekh Madar (Ex-Xuseen Giire) ee Degmada 26 June ee Magaalada Hargeysa, halkaas oo laga jeexay seeska binada Dhismahan. Taas oo keentay inay ka biyo-diidaan, isla markaan ay halkaa isugu soo baxaan dhalinyaro tiro badan oo ka mid ah dhalinyarada Kubadda ku ciyaarta Garoonkaas ee Xaafadahaas. Waxaanay sheegeen in aanay marnaba ogolaanayn in la baabi’iyo Garoonkaas, iyaga oo baaq u jeediyay Wasaaradda Waxbarashada Somaliland. “Garoonkan oo aanu ilaa yaraantayadii ku ciyaari jirnay, ilaa toban fac oo naga yar-yarina ay ku ciyaaraan. Sidaad aragtaan, garoonkii waa la yimi oo waa la jeexay, cid ilaa hadda cidda loo jeexayo noo sheegtayna ma hayno. Niman Wasiiro ah ayaa intay yimaadeen oo ay cabbireen, isla markaana jeexay iska tagay, waxaana soo waydaartay nimankii iyo Shirkaddii dhisaysay way yimaadeen, wax ay noogu jawaabaan Raggan Shirkadduna ma garanayan. Markaa waxaanu leenahay nimankan Dawladda ee meel walba jeexaya ee ilaa Garoonkii yaraa Shacabka iyo intaas oo Caruur ahi ilaashanayeen ee ay ku ciyaarayeen ee ay kaga dhuumanayeen Balwadda iyo wax walba jeexaya, iyagaa garanaya. Waxaanu leenahay ha noo daayaan nimankan dawladdu Garoomada, haddii naloo dayn waayo, Anagu yeeli mayno ee waynu isku dhacaynaa oo waanu ku dhimanaynaa.” Sidaa waxa yidhi Badri Aadan Maxamed oo u hadlay Dhalinyaradii ka gadooday dhismaha Garoonkaas..
Dhinaca kale, Wasiirka Ciyaaraha Somaliland Maxamed Siciid Muxumed ayaa sheegay in la joojiyo dhismaha Garoonkan, isla markaana wuxuu Masuuliyad-darro ku tilmaamay in la dhiso Garoon Dhalinyaradu ku ciyaarto, isaga oo sheegay in aanay Wasaarad ahaan aqbalaynin. “Arrinta Seeskan iyo cidda ku talisayba waa cid qaldan oo aan caqliyan Maskaxda ka shaqaysiin. Garoonkani waa Garoonka kaliya ee u shaqeeya Dugsiyadan iyo inta ku xeeran, maanta cidda ku fikiraysa (inay dhisto) waa cid Maskaxda ka jirran. Wasaaradaha Waxbarashada iyo Ciyaaruhu shaqooyin isku mid ah ayay qabtaan, Wasiirkii imika saddex jeer ayaan doonay oo aan soo waayay, go’aan baanu ka gaadhaynaa, waana la joojinayaa dhismahan oo waxba-kama-jiraan weeye, cid kasta oo soo abaabushayna waa waxba-kama-jiraan, qarankana Anaga ayaa ugu xil saaran. Waxaan la hadlay Taliyihii Qaybta oo aan ku wareejinayaaa in aan meeshaa la dhisi karin inta aanu Wasiirka iska arkayno, marka aanu is-aragnana waxaan ku rejo waynahay in aan meesha la dhisin ee la baa’i’iyo, Garoonkaana waxba lagama bedeli karo ee sidaa ku bushaaraysta.” Ayuu yidhi Wasiirku.
Geesta kale, Wasiirka Waxbarashada ayaan ka hadal arrintan, noomanayna suurtogelin in aanu helno markii aanu isku daynay in aanu la xidhiidhno. inkasta oo ay jiraan warar layska dhex qaadayo oo lagu qeexayo cidda la siinayo ama leh dhismahan laga jeexay Garoonka dhexdiisu, haddana ma jiraan warar rasmi ah oo dhab ahaan qeexaya ujeedada dhismaha iyo wax looga dan leeyahy in laga dhigo.